Madaxweynaha Maraykanka, Kii Ka Horeeyey, Macalinka Real Madrid, Ciyaartoyda Qaarkood Waxay Ka Hadleen Geerida Kobe Bryant? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
War naxdin leh ayaa shalay u soo yeedhay bahda ciyaaraha ka dib markii uu halyeygii kubadda kolayga ee Kobe Bryant, inan uu dhalay oo 13 jir ah iyo lix qof oo kale ay ku geeriyoodeen shil diyaaradeed oo ka dhacay waddanka Maraykanka.
Kobe Bryant oo muddo 20 sannadood ah oo uu kubadda kolayga NBA-da Maraykanka ciyaarayay waqtigiisa oo dhan u hibeeyey naadiga Los Angeles Lakers, waxa uu dunida kaga tegay xasuuso aan waligood la illoobaynin oo ay ka mid yihiin rikoodhada iskooda u taagan ee dhalinta goolasha iyo farsamooyinkiisii gaarka ahaa.
Halyeygan oo 41 jir ahaa, waxa uu ahaa laacibka saddexaad ee dhibcaha ugu badan ka dhaliyey NBA-da intii la ciyaaarayay, laakiin shalay subaxnimadii hore ayaa waxa rikoodhkiisa dhaafay LeBron James oo uu isaguna si kal iyo laab ah ugu hambaleyeeyey saacado ka hor intii aanu geeriyoonin.
Wax kasta oo suurtogal ah oo uu hantiyo laacib ka ciyaara NBA-da wuu ku guuleystay, ka hor intii aanu sannadkii 2016 ka fadhiisanin ciyaaraha.
Markii uu shalay soo yeedhay warka naxdinta leh ee dhimashadiisu, waxa is qabsaday tacsida, xasuusta dib loo soo faqay ee waayihiisii ciyaareed iyo raadka ku dayashada mudan ee uu uga tegay jiilasha dambe.
Haddaba waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa qaar ka mid ah hadalladii Madaxda dunida, ciyaaryahannada iyo tababareyaasha kubadda cagtu ka yidhaahdeen geerida Kobe Bryant.
Madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama “Kobe waxa uu ahaa halyeyga maxkamadeed oo bilaabay wax macno weyn u yeelan lahaa ficil labaad In la waayo Gianna xattaa iyaduna waa wax aynu aad uga murugoono waalid ahaan Aniga iyo Michelle waxaanu jacayl iyo duco u diraynaa Vanessa iyo dhamaan qoyska Brant oo ku jira maalin aan la qiyaasi karin.”
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump “Kobe Bryant ka sakow inuu ka mid ahaa ciyaaryahannadii ugu wanaagsanaa ee kubadda kolayga soo maray, waxa uu bilaabay nolol Aad ayuu u jeclaa qoyskiisa, mustaqbal wanaagsanna wuu lahaa Geerida gabadhiisii quruxda badnayd ee Gianna, ayaa waqtigan murugada ka sii dhigaysa mid aad u xun.”
Cristiano Ronaldo: “Wuxuu ahaa war niyad-jab leh. Halyey dhab ah oo in badan tusaale u ahaa.”
Lionel Messi: “Ma hayo ereyo… Jacaylkayga oo dhan waxaan u dirayaa qoyska iyo saaxiibbada Kobe. Farxad ayay ii ahayd inaan la kulmay oo aanu waqtiyo wadaagnay. Waxaad ahayd qof caqli badan sida kuwo tiro yar oo kale.”
Paul Pogba: “Geesiyadu way yimaaddaan oo ay tagaan, laakiin halyeeyadu waligood way jirayaan.”
Neymar: Markii uu dhaliyey gool ciyaartii xalay, waxa uu ku dabbaal-degay lambarkii uu xidhan jiray Kobe Bryan, isaga oo farihiisa ku tilmaamay 24.
Macalinka Kooxda Real Madrid Zinedine Zidane Ayaa Yidhi “Waa war naxdin leh oo saameeyey qof walba, dhamaanteen Aad ayaan uga xunnahay.”
Kooxaha Real Madrid, Bayern Munich iyo Barcelona: Kooxaha dunida intooda badan ayaa ka hadlay, laakiin saddedan kooxood ayaa markiiba warbaahinta soo geliyey sida ay uga naxeen geerida Kobe Bryant.
Tobanka Weerarka Ee Ugu Fiican Boos Walba Oo Garoonka Dhexdiisa Ah Waxaa Hogaaminaya Sergio Aguero?